Dadka marka ay kula hadlayaan waxaa wanaagsan in aad dhageysatid adiga oo soo xaadirinaya dhamaan xubnaha dareenkaaga, qiimayn aad qiimaynayso hadalkooda darteed.
Sidoo kale waxaa wanaagsan marka aad hadlayso in aad hubisaa soo af meeridda hadalkaaga inta aysan soo af meermin dhagaha dadka hadalkaaga dhageysanaya, micnaha waxaan ula dan leeyahay inta aysan dadku ka daalin hadalkaaga.Hadalkaaga ha noqdo hadal gaaban oo hadaf leh xikmadna leh.
HA SHARREYSAN MAALMAHA
Laga yaabee in maalin walba aysan nolosheena u wanaagsanayn, laakin mid ayaan hubaa taas oo ah in maalin walba dhan wanaagsan ay leedahay,maalin walba oo timaadana ay la timaado wanaag uun, haddii maanta wanaageeda uusan nagu shubmin, hubaal in uu meel kale ku shubmayo, sidaa darteed waa in aanan sharraysan Maalmaha.
Marka la doonayo dhibaato in la xalliyo, waa in la qiraa marka hore jiritaankeeda, si cadna loo fahmaa baaxadda ay dhbaatada la egtahay lana ogaadaa sababta keentay dhibaatadaas, iyada oo dulqaad laga muujinayo waxa aan laga xallin Karin, lagana wada tashanayo qaabka xallinteeda iyada oo lagu dadaalayo is faham guudna laga yeesho.
Intaas aan soo sheegay waa saldhiga xallinta dhibaatooyinka haddii intaas la isla garan waayo, waxaa halis loogu jiraa dhibaatada la xallinayo mid kasii daran in la abuuro oo hadhow jahwareer baahsan uu meesha ka dhaco.
Adaabtu waa asturnaan, haddii ay wanaagsantahay waxay dabooshaa xumaantaada oo dhan, haddii ay xuntahayna waxay dabooshaa wanaagaaga oo dhan.
AFARTA KOBCISA JIRITAANKAAGA
Afar waxey kor yeeshaa jiritaanka qofka xitaa hadduu jaahil yahay ama uusan aqoonba lahayn.
4 DHAQANKA WANAAGSAN
Afartaas qofka isku helaa darajad jiritaanka noloshiisa waa kor, waana mid la hubo, su’aashu waxay tahay imisa ayaad haysataa?
CARUURTA BAL EEG!
Bal u fiirso caruurta uma murugoodaan wixii ka tagay, mana daneeyaan waxa ay noqon doonaan, sidaas darteed,waxaad arkaysaa in cunuga yar uu ku raaxeysanayo waqtiga uu taagan yahay, soo lama oran karo waa intaas inta naga maqan inagana? ama aan la’nahay!
Marka aan aragno dad heer gaaray waxaan aaminaa in ay ahaayeen waligood sidaa, kuma fakarno in ay ku heleen heerkan sare ee ay gaareen nasiibkooda iyo dadkaalkooda, guushu waa qorshayn soo dhadhamisay guul iyo guul darraba iyo taabashada waddooyin badan oo dhiig iyo dheefba laga helay laguna lunshay, waa in aan garanaa in guushu ay tahay safar dheer.
DADKA LAGAMA MAARMO
Ma jiro qof ka maarmo dadka, inta badan ee uu qofku sameeyo horumar nololeed, waa inta badan ee ay siyaaddaa baahida uu u qabo dadka, halkaas waxaan ka garan karnaa in qof isku filnaasho gaaraya uusan jirin, qofka sida uu doono ha u hanti badnaado, sida uu doono ha iskugu filnaado, hubaal in uu dad u baahan yahay, dad la’aantoodna uusan dareemi Karin isku filnaasho waafi ah.
KA FAGOW WAX AMRIDDA
Ka fagow in aad wax toos u amarto, maxaa yeelay ma jiro qof jecel in la amro, inta aad ku dhihi lahayd qof samee sidaa oo amar ah, waxaa wanaagsan in aad ku dhahdo “hebelow ka waran sidaa haddaad samayso? Oo qofka inta aad amar siin lahayd waxaa wanaagsan in aad isticmaasho xeelad kale uu isagu amar isku siinayo nafsad ahaantiisa.
OOY AMA QOSOL
Noloshu waa mid soconaysa haddaad ooyso iyo haddaad qososhaba, waxba kama baddali kartid sida loogu tala galay, maxaa yeelay, adiga ma aadan qorshayn adigana ma aadan lahayn sababta jiritaankeeda, sidaa darteed, ma ahan in aad dhabarka saarato culays aadan waxba ka faa’iidayn qaadiddiisa, waxaa hore loo dhahay “murugada maanta ma ahan mid kaa reebaysa xanuunka barrito, balse waxey kaa beer darreysaa raaxada maanta aad xaqa u lahayd oo kaliya”
la soco qaybaha kale Axad walba